Kuratidza zvinyorwa neelebheri Kořenov
Příchovice kubva pakukwirira
Příchovice (German Stefansruh kana Stephansruh kana Przichowitz) musha, chikamu wedunhu Kořenov mudunhu reJablonec nad Nisou. Inowanikwa anenge 3 km maodzanyemba akadziva kumadokero kweKořenov. Kune 279 kero dzakanyorwa. Iyo ine huwandu hwechigarire hwevanhu 271. Příchovice inogara munzvimbo ye cadastral yePříchovice u Kořenova nenzvimbo ye4,94 km2. Pakutanga, Příchovice yaisanganisira nzvimbo dzekugara uye zvikamu zveDolní Příchovice, Horní Příchovice, Pustiny, Moravia, Libštát, Potočná, Nová Huť, Tesařov uye mazhinji enzvimbo dzakagara dzoga uye aive mataundi akazvimiririra mumakore 1850-1960; Muna 28 kereke yematanda yeSt Vitus muPříchovice yakagadzwazve muna 1897 mushure mekuvakwa kukuru. Parishi iyi yakavambwa muPříchovice muna 1690. Iyo yakavakiswazve rectory nekuwedzerwa kubva muna1862 inoshanda, zvine chekuita nebasa remupristi Miroslav Šimáček kubvira 1736, zvakare senzvimbo inowanikwa pakati pehupenyu hwevechidiki Příchovice Crossroads mumweya weFocolare kufamba.
Muna 2011, rakakura dombo remuchinjiko rakavakwa zvakare pazasi peiyo Štěpánka Lookout Tower. Pamuchinjiko muchimiro chehondo dzeNazi dzekushongedza kweIron Cross haina kudzoserwa swastika yakatsakatiswa nevatorwa vekuCzech muna 1945. Muchinjiro unomiririra nzvimbo yekuremekedza yakavakwa nevagari veGerman muna 1944 kuti vayeuke varwi veGerman vakadarika. Mazita emisha akaiswa pamabwe uye ngowani uye maruva akaiswa padziri. Mushure me1945, muchinjiro pamwe nekudzingwa kwevaGerman kwakaparadzwa.